पत्नीलाई संसारकै महंगा–महंगा उपहार दिने यी पति
एजेन्सी । ब्रिटिस राजकुमार विलियम र उनकी पत्नी केट मिडलटन हाल ६ दिने भ्रमणका क्रममा छिमेकी देश भारतमा छन् । भारतमा ब्रिटिस राजकुमार र उनकी पत्नीको भन्दा पनि केटले लगाएको गहना र लुगाहरुको बिषयमा निकै धेरै चर्चा भइरहेको दैनिक भास्करले जनाएको छ । समाचारमा केटले आफ्ना पतिबाट पाएको ५ महंगा गिफ्टको विषयमा चर्चा गरिएको छ । सबैभन्दा महंगो केटको...
युरोपको एक बधशालामा लगेको गाई रुन थालेपछि … (६२ लाखले हेरेको भिडियोसहित)
सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल बन्यो । उक्त भिडियोमा तपाई एक गाईलाई रोइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ । यो भिडियो जर्मनीको हो, जहाँ हत्या गर्नको लागि एक गाईलाई वधशालामा ल्याइएको हुन्छ । गाईले सायद थाहा पाउँछ कि उसको हत्या हुँदैछ । त्यसपछि उसले आँसु निकाल्न थाल्छ । जुन आँसु जनावरको हकहितमा काम गर्नै एक संस्थाको नजरमा पर्छ र त्यहाँबाट...
मृत्युपछि गंगामा बगाइएका व्यक्ति १४ वर्षपछि जिउँदै घर फिर्ता !
एजेन्सी । सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना संसारमा भएको छ । मानिसलाई यो घटना विश्वास गर्न मुश्किल पर्ने गर्छ तर यस्तो घटना भएको भने सत्य भने समाचारमा उल्लेख छ । मरिसकेको मान्छे स्मृतिबाट समेत हराई सकेको अवस्था एकाएक १४ वर्षपछि मानिस फर्केर आएपछि परिवार सहित सारा गाउँ नै चकित भएका छन् । भारतको एक प्रान्तमा भएको घटना हो यो । उक्त व्यक्तिको नाम...
जुत्ता देखाएर विरोध गर्ने शैली फैलिँदै, यी हुन् जुत्ता खाने विश्वका नेताहरु
एजेन्सी । नेताको विरोध गर्ने र नेताप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्नका लागि पछिल्लो समय विश्वभरि जुत्ता प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जुत्ता प्रदर्शन गरेर वा नेतातिर जुत्ता फाँकेर विरोध गर्ने र आक्रोश व्यक्त गर्ने काम विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा हुने गरेका छन् । शनिवार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गरेको...
इटहरीमा गोली चल्दा................!?(फोटो फिचर)
११ वर्षअघि यही बेला आन्दोलनको मौसम बनेको थियो । घर–घरबाट सर्वसाधारण तानाशाही शासनव्यवस्थाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । के केटाकेटी, के गृहिणी, के युवा, के महिला सबै सडकमा आएका थिए । त्यही आन्दोलनको जोडले तत्कालीन राजाले गद्धी त्याग गर्नुपरेको थियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । जनआन्दोलनको सो समयमा पूर्वकै केन्द्र...
३६० केजी र १५ फिट लामो भीमकाय गोही !
एजेन्सी । अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा एक शिकारीले ३ सय ६० केजी वजन भएको १५ फिट लामो राक्षसजस्तै ठूलो घडियाल गोहीलाई मारेका छन् । व्यवसायिक शिकारी ली लाइटसले बीबीसीलाई भनेका छन् कि त्यो भीमकाय घडियाल गोहीले उनको कृषि फर्मका पशुपंक्षीलाई लामो समयदेखि शिकार बनाउँदै आएको थियो । लीका अनुसार उनी र शिकारी गाइड ब्लेक गोडविनले आफ्नो कृषि...
राष्ट्रपतिले ढाट्दा राउटे भोकभोकै(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । राष्ट्रप्रमुखले बोलेको कुरामा सर्वसाधारण नागरिकले विश्वास राख्ने कि नराख्ने ? धेरैको उत्तर हुनसक्ला, निश्चित रुपमा राख्ने । तर नेपालमा बसेर यहाँको नागरिक भएर राष्ट्रप्रमुखले बोलेको कुरामा तपाईंले विश्वास राख्न थाल्नुभयो भने तपाईंलाई धोका पनि हुनसक्छ । यस्तै भइदियो अछामका राउटेहरुलाई । राष्टपति विद्यादेवी...
हिन्दू–मुस्लिम प्रेमजोडीद्वारा हिरासतमै आत्महत्या, तीन प्रहरीको जागिर चट्, सरकार पनि हल्लियो
एजेन्सी । प्रेमको कुनै जात हुन्न । जुनसुकै जात, धर्म वा परिवारबाट होस्, मन मिलेपछि संसार जित्ने आँट आउँछ र मानिस एकअर्कामा समर्पित भएर युग युगसम्म सँगै बाँच्ने कसम खाएर अगाडि बढ्छ । तर प्रेममा जब अवरोध सिर्जना हुन्छ, दुई मुटुलाई छुटाउन कोशिश हुन्छ, पागल प्रेम जोडी सहजै मृत्यु रोज्न समेत पछि पर्दैन । भारतको झारखण्डमा अवस्थित राँचीको एक...
लण्डनका पसलमा गौमूत्र हारालुछ !
बीबीसी । गौमूत्रको औषधीय गुणको विषयमा हिन्दू धर्मशास्त्रहरुमा राम्रै व्याख्या गरिएको छ । गौमूत्रको यही गुणका कारण हिन्दूहरु गाईको पूजा गर्छन र गाईलाई माता सरह मान्छन् । आधुनिक समयमा कतिपयले यो कुरा नमान्लान् पनि । तर विज्ञहरुले समेत गौमूत्रको औषधीय गुणको विषयलाई पुष्टि गरेपछि अहिले नेपाल वा भारतमा मात्र होइन, विकसित मुलुकहरुमा समेत...
महाराजा झै सास्ती दिन्छन् लोकतन्त्रका राजा पनि (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । ज्वरोले निस्लोठ भएकी बहिनीलाई नर्भिक अस्पताल दौडाउँदै गर्दा मंगलबार साँझ रत्नपार्कमा रोकिएका उपेन्द्र महर्जन नेपालका नेताहरुको ताल देख्दा हैरानी व्यक्त गरिरहेका थिए । सेना दिवसको अवसर पारेर नेपाली सेनाले भद्रकालीमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रम(रात्रि भोज)मा सहभागी हुन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउने...